Ubuhle bemilenze yabasetyhini buxhomekeke kwiziphi iintlobo zeentambo intombazana enxibe ngayo. Nabani na umntu wesibhambathiso esibonakalayo esichengile kwaye engakhuselekanga.
Iingubo kunye neengubo kufuneka zikwazi ukukhetha nokuxhuma kunye nale nto. Ngokukhethwa kwamanzi kweemveliso zanamhlanje, ukhetho olukhethiweyo kuluntu oluthile aluyona ingxaki kubafazi banoma yiphina ukukhula. Ngoku kuthengiswa kukho imizekelo eyahlukileyo eyahlukeneyo eneemeko ezihlukeneyo zee-sock, izitayela kunye nobukhulu kunye nesimo sesithende. Ngokuqhelekileyo, ukhetho lwamantombazana aphakamileyo ahlukeneyo alufani. Enyanisweni, izicathulo nazo kufuneka zikwazi ukugqoka. Ukuba ukhangele indlela umfazi ogqoke ngayo i-hairpin kunye nendlela umfazi ogqoke ngayo izitya, ukwahlukileyo kuyabonakala. Ngoko ke iziphi izicathulo zokukhetha intombazana encinane? Kuya kuxhomekeka kwinjongo bazinzela yona. Ukuba intombazana ifuna ukuvelisa ukuphakama kwayo, kwaye yandisa ubude bemilenze yakhe, igxininise ukunyuka komfanekiso, njl., Ke izithende ziza kuncedwa kwaye ziphakame ngakumbi.
Amantombazana amfutshane okuphakama amancinci ahlala ebhekene neengxaki zokukhetha iimpahla, ndiyathetha malunga nobude beebhulukhwe okanye iingubo ezinde, nje "ziphela" kuwo, zonke zifanele zinqunywe zibe mfutshane. Kakade ke, akukho mntu uxela ukuba izithende zihlobisa umfazi kwaye zenze amancinci kwaye amthande. Kodwa kwakhona, konke kuxhomekeke kwisitala sale nto okanye loo ntokazi, ukuba unamathele kwisitayela sezemidlalo kwaye ugweme izikhwama zezoshishino, ngokuqinisekileyo ukhetha izicathulo kwi-sole plat okanye izicathulo ezinesithende ezingekho ngaphezu kwe-3-4 cm kunye nesihlangu esilungeleyo kunye nesimo se-sock . Amantombazana amancinci amancinci anenzuzo enkulu kumantombazana amade, ukuba ufuna ukukhulisa ukuphakama kwakhe ngokubonakalayo, unokukwazi ukubeka kwiintendelelo ezahlukeneyo ukuphakama, kunye namantombazana aphezulu ahlale ephakamileyo, kwaye akukho nto ongayenza ngayo.
Kulo xesha, iindlunkulu ezinkulu okanye ezisezingeni eliphezulu ezizimeleyo. Akunakwenzeka kwimoya ngokuqhelekileyo ukushiya iipalsi, ezinokugqoka njengee jeans eziphezulu, kunye neengubo ezintle. Ewe, intombazana enesithende ephezulu ibukeka ilungileyo kunye nesetyhini. Ngoko ke iziphi izicathulo zokukhetha intombazana encinane? Ngokuqinisekileyo, izicathulo ezinezithende eziphezulu, kodwa oko kwakungumzekelo weklasi (ngoko kuya kuhambelana naluphi na uhlobo lwesambatho), abaqulunqi befestile abantombazana abaphakamileyo bephakamileyo batusa izithende ezingekho ngaphezu kwe-8 cm, ukuze umlenze ubonakale untle kwaye unomlinganiselo. Ewe, kwaye ungakulibali ukuba unxibe ibhulukwe, ngoko ubude obude bebhulukwe ngulowo ohlanganisa isiqingatha esikhulu sesithendeleko, ngoko ungakhange ubonakale ngathi "udutshulwa." Ukukhethwa kwabasetyhini abaphantsi kuya kuhluka kwizinto ezi zinto zenzelwe yona okanye le zihlangu. ukuhamba nabantwana kunye nezinto ezifana. Ngokuqhelekileyo izicathulo zemihla ngemihla ezinesithende eziphezulu azifanelekanga, njengoko zonakalisa impilo yakho, imilenze nayo, ngamanye amaxesha kufuneka iphumle. Ukhetho lunokuxhomekeke kwithuba lexesha ukuba ihlobo likwazi ukufumana isithende esincinci okanye isithwathwa esincinci, ingaba iingubo okanye izicathulo ze-ballet, kuba, ubona, ngeengubo zokukhanya, izicathulo eziphezulu eziphezulu aziyi kubukeka zihle kwaye ngokucacileyo azivumelani nesimo . Ebusika, ewe, unako ukhetho oluphezulu kwizithende eziphakamileyo okanye iqonga, kodwa into eyona nto kukuba bazinzile. Ngaloo ndlela, izicathulo zamantombazana amancinci - ngulo linye wena, njengokuba ukhululekile kwaye ukhululekile.
Ukuba ukhetha izicathulo ezinezithende okanye iqonga. Emva koko kufuneka ukhethe izicathulo eziphezulu. Ngoko, ukuba ungayilinganisi ukuyila kunye nokuba umlenze ukhangelekile kwaye ukhangelekile. Kwaye kungekhona nje ukuba babegqoke "ipads". Ukukhetha izicathulo kwiplatifti, ukhetha ukhetho ekuthembekeni nasekuzinzileyo. Kodwa ngokwenene akukhathazeki ukuba yiyiphi ukukhula, ukulungelelanisa kunye nokuthuthuzela kunye kunye nentle.
Fumana isitayela sakho kwiingubo
Iimpawu zezinwele zeMfashini zoNyaka omtsha
Kunokuba intlanzi iluncedo
IJam kwi-raspberry (Kiev)
Ziziphi iimfihlelo kwaye ungabelana nobani na?
Ukunciphisa umzimba u-Pugacheva wabuyela eSochi
Idada ixakekile ngeeshizi
Indlela yokukhetha isipho kubathandekayo bakho
Indlela yokwenza i-cocktail yolwandle, iindlela zokupheka ezingcono kwi-2016
Ziziphi izitofu ezenzayo kwiinyanga ezintathu
Indlela yokukhetha ipompu yebele kunye nendlela yokuyisebenzisa